Zụta Desogestrel ntụ ntụ (54024-22-5) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Desogestrel powder (54024-22-5)
SKU: 54024-22-5. Category: Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Desogestrel powder (54024-22-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nlekọta njikwa.
Desogestrel ntụ ntụ chọtara na 1972 ma kpoo ya maka ọgwụgwọ na Europe na 1981 .Ọ bịara dị na United States na 1992.Desogestrel bụ mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya "progeneration" ọgbọ nke atọ.Ọgbụ na norethisterone, ọ bụ otu n'ime ndị na - nke a na-adịkarị dị ka "obere pill" maka ịmị nwa. A na-ere ahịa ọtụtụ mmadụ n'ụwa nile. Ọ dị dị ka ọgwụ ntanetị.
Desogestrel ntụ ntụ isi agwa
Molekụla Formula: C22H30O
Ọdịdị ntụpọ nke Desogestrel
Aha Igwe: Desogestel ntụ ntụ
Aha aha: Cerazette, Mircette, Desogestrel powder, Cerazette powder, Mircette powdrr, 54024-22-5
Desogestrel ntụ ntụ Usage
Desogestrel powder (Cerazette) bụ mbadamba ụrọ mgbochi ọnụ, nke a makwaara dị ka 'mini pill'. Cerazette na-enye nchedo ozugbo pụọ n'afọ ime, mgbe e mere ya n'ụbọchị mbụ nke oge gị. Ọ dị iche na pill ịgba ọgwụ jikọtara ya n'ihi na ọ nwere naanị otu ihe na-arụsi ọrụ ike, progestogen artificial.
Dịka ọtụtụ ọgwụ mgbochi nke ọnụ ọgụgụ dị ala, Cerazette bụ ụzọ dị irè nchedo ma gosi na ọ bụghị naanị 99% dị irè na nsogbu nyocha . E gosikwara na ọ ga-enye aka n'ibelata ọnọdụ nke iru ala na ihe mgbu. Iwere ọgwụ mgbochi a na-enye gị mgbanwe, n'ihi na n'adịghị ka ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi gị, ị nwere ike iburu ọgwụ gị gaa na 12 awa mgbe e mesịrị ka oge gị
Ihe na-emekarị ka ọ bụrụ na ọ bụ nke ọma. Ndị a gụnyere:
- Ngwurugwu mpempe obere mụọ na-enye gị nhịahụ mgbochi ozugbo ma ọ bụrụ na i were ya n'ụbọchị mbụ nke oge gị
-Idi na ogwugwu ya, o kwesiri iji ma oburu na i nweghi ike, ma o bu na achoghi, jiri ogwu ogwu eme ihe na estrogen
- Enweghị estrogen na obere pill ịmị nwa a na-eme ka ọ dị mma iji mee mgbe ị na-enye nwa ara
- Di na nwunye na-eji Degestrel (Cerazette) maka ebumnuche ime ọgwụ ga-achọpụta na oge ha anaghị adị mgbu karịa ka ọ dị
-Degesogestrel (Cerazette) nwere ike were ụmụ nwanyị na-enye ara ara, na ndị na-elekọta 35 na ise anwụrụ, nke bụ ihe mgbochi nke igbochi ọgwụ abụọ.
-Nke ule ogwugwu 94% nke ụmụ nwanyị na-ata ahụhụ site na dysmenorrhea (oge na-egbu mgbu) enwere ọganihu dị mma
Kedu ụdị usoro nke Desogestrel powder
ANYỊ NA-ECHICHE NDỊ A GA-EBE IHE NDỊ NA-AHỤ NA-EBE NA NTỊ NA AHỤ GA-EBE EKWUKWU NDỊ NA-ECHICHE NDỊ MAKA ỤMỌDỤ ỌZỌ
The Desogestrel powder (Cerazette powder) ọgwụ dọkịta gị na-atụ aro ga-adabere na ndị na-esonụ (jiri ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe niile metụtara):
Desogestrel ntụ ntụ dị na usoro ndị a:
Desogestrel powder-ethinyl Estradiol Akwụkwọ Mbadamba ụrọ nke Triphasic
Kwaiti nke Desogestrel powder (Cerazette) nwere mbadamba 28 - 4 izu izu.
Were mbadamba nkume gị kwa ụbọchị n'ihe dị ka n'otu oge ahụ. Gbanye mbadamba mbadamba nkume, na mmiri.
A na-ebipụta bọmbụ n'ihu ihure ahụ, n'etiti mbadamba. A na-ebipụta ụbọchị nke izu na azụ nke warara ahụ. Kwa ụbọchị na otu mbadamba.
Oge obula ịmalitere eriri nke Desogestrel powder (Cerazette), buru mbadamba site na nrigo n'elu. Akwụsịla naanị otu mbadamba. Dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ịmalite na Wednesday, ị ga-ewere mbadamba nkume ahụ site n'elu akara akara (na azụ) na WED.
Nọgide na-ewere otu mbadamba nkume kwa ụbọchị ruo mgbe mkpọ ahụ tọgbọ chakoo, na-agbaso ntụziaka nke akụ na-egosi. Site na-ele anya n'azụ mkpọ gị i nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na i werela mbadamba nkume gị n'otu ụbọchị.
Ị nwere ike ịnweta ọbara ọgbụgba mgbe eji Desogestrel powder (Cerazette), (Lee ngalaba 4 Side Effects) mana ị ga-anọgide na-ewere mbadamba nkume gị dị ka ihe nkịtị.
Mgbe obere eriri na-efu, ị ga-amalite na Desogestrel powder (Cerazette) na-esote ụbọchị - na-enweghị nkwụsịtụ na-enweghị ichere.
Kedu ka Desogestrel powder si arụ ọrụ
Na-agbakwunye ndị na-anabata ya na estrogen. Ngwongwo ndị a na-agụnye gụnyere traktị nke nwanyi, mammary gland, hypothalamus, na pituitary. Ozugbo agbatị na onye nkwụnye ahụ, ndị ọkachamara dị ka Desogestrel ntụ ntụ ga-eme ka ugboro ole ịhapụ nke gonadotropin na-ahapụ hormone (GnRH) site na hypothalamus ma mee ka LH na-amalite ịmịnye ọbara.
Ihe na-eme ka a na-egbochi ya bụ ịhapụ akwa si na ovary (ovulation). Ọ na-emekwa site n'ịba ụba nke akwara anụ ahụ n'olu nke akpa nwa, na-eme ka o siere ike iji spam si na ikpu banye n'afọ. Site na igbochi spam nke na-abanye n'ime akpa nwa, njikọta njikọta ọ bụla nke àkwá ọ bụla a tọhapụrụ bụ obere ihe.
Desogestrel powder (Mircette powdrr) na-emekwa ka ọ gbanwee àgwà nke akpa nwa (endometrium). Nke a na - egbochi nkwụsị nke nsen ọ bụla a zụrụ azụ n'elu mgbidi nke akpa nwa, si otú a gbochie ime ime.
Desogestrel ntụ ntụ adaba na ụdị X:
E gosiputara na ụmụ nwanyị na-eji Desogestrel kpuchie mgbe ha dị ime nwere ike inwe ụmụ nwere nsogbu. Enweghị ọnọdụ ebe uru nke ọgwụ na-enye maka nne na-esi na-ebute ihe ize ndụ nke nsogbu nye nwa ahụ. A gaghị eji ọgwụ ndị a eme ihe mgbe nile.
Ngwurugwu Desogestrel (CAS 54024-22-5)
Ihe Desogestrel ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Desogestrel powder (Cerazette) bụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọgwụ, nke pụtara na e nwere obere ihe ize ndụ nke mmepụta mmetụta. N'ọnọdụ ndị a na-agwọ ọrịa, Cerazette nabatara nke ọma site n'aka ndị sonyere ya, yana obere mmetụta ndị dị ka:
Mgbanwe nke ọnọdụ, mgbatị na-arịwanye elu (libido), isi ọwụwa, ọgbụgbọ, ihe otutu, mgbu obi, oge oge na oke uru
Nnyocha na-egosi na ndị a na-erughị otu n'ime ụmụ nwanyị iri. Mmetụta ndị a kwesịrị ịdaba ka mpempe akwụkwọ ahụ na-ahụ ya, ma ọ bụrụ na ha emee na-eme ma nọgide, ị ga-akpọtụrụ dọkịta iji kwurịta ọnọdụ gị.
Otu esi zụta ihe ntụ ọka Desogestrel si AASraw
Desogestrel ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
1 nyochaa maka Desogestrel powder (54024-22-5)
Desogestrel uzuzu bu ihe omuma